WAR DEG DEGA:Madasha Shirka Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe Somaliya Oo Weerar Ismiidaamina Lagu Qaaday |
WAR DEG DEGA:Madasha Shirka Maamul U Samaynta Gobolada Dhexe Somaliya Oo Weerar Ismiidaamina Lagu Qaaday
Waxaa saakay Weerar Ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari nuuca raaxada ah lagu qaaday xarunta uu kasocdo Shirka Maamul u sameynta Goblada Dhaxe ee Kafaalo oo ku taala Magaalada Cadaado ee Xarunta Maamulka Ximin iyo Xeeb.
Sida aan Wararka ku heleyno Weerarka waxaa ka dambeeyay afar nin oo hubeesan kuwaa oo watay gaari Nuuca Surf-ta loo yaqaano, waxa ayna ragan iyo gaarigooda xarunta Kafaalo kasoo galeen dhabarka dambe ee xaruntaasi oo ah goob aysan inta badan dadka iyo gaadiidka adeegsan.
Kooxdan hubeesan ayaa qorshahoodu ahaa in dhabarka dambe ee Darbiga xarunta Kafaalo in gaariga lagu qarxiyo kadibna raga hubeesan ay galaan xaruntaasi oo deegana u ah in ka badan 400-qof oo isugu jira Odayaal iyo Ergo mataleysa beelaha Dega gobolada Dhaxe.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo ilaalinayay xarunta saarnaana meel kore ayaa la sheegay in markii ay gaariga ka shakiyeen uuna kusoo dhawaaday darbiga xarunta ay ku fureen rasaas , waxaana dhcaday in dagaalyahandii gaarigasai saarnaa ay dhankooda ay rasaas fureen , waxaana xiligaa kadib qarxay gaarigii iyo ninkii waday iyadoona sadaxda kale ay garaiga ka dageen.
Waxaa dhax maray Ciidamadii ilaalada ka hayay xarunta Kafaalo iyo Ragii hubeesnaa iska hor imaad daqiiqado kooban socday, waxaana toogasho lagu dilay sadaxdii nin ee hubeesnaa .
Goob jooge ku sugnaa halka uu Weerarku ka dhacay ayaa sheegayin la toogtay sadaxdii nin ee hubeesnaa kuwaa oo aysan u suurto galin in ay gudaha u galaan xarunta Kafaalo , waxaana toogashadaasi geestay ciidamadii ilaalada ka hayay xarunta Kafaalo.
Inta la xaqiijiyay Weerarka lagu qaaday Xarnta Kafaalo waxaa ku dhintay afartii nin ee weerarka ka dambeeyay, walina si dhab ah looma oga qasaaraha kasoo gaaray Weerarkii Ciidamadii Itoobyaanka ahaa ee xarunta ilaalinayay.
Ma jiraan wax dhibaato ah oo soo gaartay odoyaashii iyo dadkii kale ee ku xareesnaa Xarunta Kafaalo ee saakay weerarka lagu qaaday, waxaana si weyn loo xoojiyay amaanka guud ee xarunta uu kasocddo Shirka Maamul u sameynta Gobolada Dhaxe.
Wasaarada Amniga Qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in Weerarkii saakay lagu qaaday xarunta Kafaalo ee Magaalada Cadaado la fashiliyay, waxa ayna Wasaardaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen kaliya ragii weerarka ka dambeeyay.
Al-Shabaab ayaan wali ka hadlin weerarka saakay lagu qaaday xarunta Kafaalo uu kasocdo Shirka Maamulka loogu sameenayo Gobolada Dhaxe, waxaana la filayaai Al-Shabaab ay war kasoo saaraan saacadaha soo aadan oo ku aadan Weerarkaasi Cadaado ka dhacay.